Mutemo Crypto Market mu 2018 - Tray News - Blockchain News
Nyanzvi dzinodavira kuti 2018, tinogona kutarisira kuti hurumende kuchawedzera masimba pamusoro ICO musika, cryptocurrency exchanges, uye vatengesi. Panguva imwe, zvikuru nechepakati mabhanga zvenyika vanoonga cryptocurrency zvinogona-zvikurukuru, bitcoin-uye vakagadzirira kutenga nayo gore rinouya. Takurukura mune mirayiridzo nzira dzakasiyana-siyana mitumbi zvemari vakatarira crypto musika pachava mu 2018.
Gore rino hurumende mari munyika dzakawanda vakasuma ICO murau vakaratidza maonero avaiita nzira iyi kukwezva inivhesitimendi. saka, China uye South Korea pamutemo akarambidza ICO musi nenharaunda dzavo. Mukupesana, USA, Kanadha, Siwizarendi, Japani, Singapowo, uye U.A.E. rakapa zvisarudzo zvinoverengeka anobvumidza ICO pamutemo, pamwe ICO riri pasi fiscal masimba murau. Rakapa zviratidzo anogona kuwira pasi huripo mitemo, semuyenzaniso, mumwe yokudzora interfund kwema. Maererano Jerry Brito, Executive Director of nonprofit sangano Coin-Center, Hurumende zvichatevera US muenzaniso uye kuwedzera masimba pamusoro chiratidzo okutengesa mu 2018. Muna USA, zvimwe zviratidzo dzakananga imwe ICO vanoonekwa kuchengetedzeka uye yaidzorwa mitemo akakodzera. Stephen Obie, mumwe nomumwe ari dzakawanda mutemo yakasimba Jones Day, anotaurawo zvakafanana pfungwa:
“Ndinofunga zvirokwazvo zvikuru yakajeka zvichaitika kuburikidza vatevedzere nezviito uye dzimwe nhungamiro kuti SEC achapa muna tokenized pamusika. The regulator anoziva pamusoro musika ichi uye anotora kwakakanganisa.”
Nyanzvi dzinodavira kuti zviito akafanana ICO achabatwa kuremekedzwa cryptocurrency, zvikuru sei, bitcoin. dmitriy Zhulin, co-muvambi dzi mararamiro, anogara pamusoro nyaya iyi:
“Sezvo Bitcoin booms, chengetedzo achatanga kukonzera ICOs uye anozodzidza cryptocurrencies, zvisinei, zvakaoma zvino kufungidzira kana ichi vachava zvakanaka kana kunaka mugumisiro nokuda indasitiri. Pasinei nokuwedzera murau munyika crypto nzvimbo, Ndinotenda kuti blockchain somunhu zvemichina haangaiti kudziviswa nokuda rinorema murau.”
Bitcoin kwema kare kurambidzwa munyika, akadai Bolivia, Ekwadho, India, Bhangiradheshi, Aisirendi, Kijisitani, Moroko, Neparo, Marazhiya, Indonezhiya, uye Taiwan. Panguva imwe, China, apo wakarambidzwa kuti kuchinjanisa pamusoro yomunharaunda cryptocurrency exchanges, uye Russia vari kugadzirira kubhadhara cryptocurrency murau, izvo zvinogona kupinda muupenyu 2018. MuUnited States, bitcoin makambani achafanira kushuma pfuma kuna Internal Revenue Service (IRS) uye kubhadhara mutero maererano Notice 2014-21.
On December 4, muUK uye EU mari regulators akazivisa pamusoro kuronga zvakaitika mutemo pasi iyo cryptocurrency vaitengeserana uye vanoita, mune zvimwe zviitiko, zvaida pachena ruzivo rwavo pachavo, uye cryptocurrency exchanges aizofanira kupa masimba pamwe kuwana mushandisi mashoko. Maererano mamiriro zvemari kwemiviri, nezviyero izvi zvinodiwa kudzivirira mari-laundering basa uye ugandanga mari. Harmonization pamusoro Nzira dzakasiyana kune nyaya iyi zvichazadziswa mukutanga 2018, uye mutemo vachaenda simba pakazopera gore rinotevera.
G7 nechepakati mabhanga uye cryptocurrency
chiratidzo ose inoratidza chisimbiso pamusoro crypto musika murau nezviremera zvemari munyika dzakasiyana. Regulators, zvisinei, ona zvaikwanisa kuitwa cryptocurrency uyewo. mu 2018, G7 nechepakati mabhanga achatanga kutenga cryptocurrencies kusimbisa reserves vatorwa avo. A pakachinja G7 nechepakati mabhanga achange kana bitcoin musika capitalization akapfuudza kukosha SDR zvose (chinokosha mufanidzo kodzero). Zviri yemarudzi kuchengeterwa twa vakasikwa neInternational Monetary Fund (IMF) kutsivira ayo nyika nhengo’ pamutemo reserves. Bitcoin capitalization, semuyenzaniso, anenge atopfuura kukosha SDR (anenge $291 bhiriyoni).
Chimwe tipping pfungwa achava nokuziva kuti zvinokosheswa G7 mari vari devaluing pamusoro cryptocurrencies. mu 2018, tichava kupupura bitcoin nezvimwe cryptocurrencies achiva rinonyatsooneka dzakawanda dzeEurope kubudikidza musika capitalization, maererano nyanzvi.
National digitaalinen mari
Paakasika nyika digitaalinen dzeEurope, Nyika dzakawanda dziri kunyange kuronga kushandura zvavo vemarudzi mari kuti blockchain. Jim Angleton, Purezidhendi Aegis FinServ Corp, ndiye chokwadi chokuti nhamba kunyika kubudisa mari akadaro chete kukura:
“Tinoziva kuti mazuvano 108 Nyika dziri kuedza achivaratidza digitaalinen dzeEurope achitsigira kubvisa kwavo bepa mari uye exiting kutsamira pana U $ D. tinotenda 20+ Countries ichatanga Beta Testing vakananga zvinangwa zvavo.”
Last October, takasvika pakuziva kuti Russia kuti awane zvayo National digitaalinen mari pachavo, cryptoruble. Hurumende Achatora masimba pamusoro issuance uye kuparadzirwa cryptoruble muRussia, pamwe cryptocurrency kuchera ava hazviiti. wo, Venezuelan President Nicolás Maduro rakapa mirayiridzo, maererano izvo pakuparurwa National cryptocurrency El Petro ari kurongwa kwegore. Venezuelan dzinongoitika upfumi mumatanda, akadai goridhe, mafuta, uye mangoda, kuti shure El Petro.
The ICO uye crypto zvokutengeserana Pamutemo rarambidzwa China, asi kwakanga nyika yokutanga kuti kuedzwe digitaalinen kumumvuri National mari. Yao Qian, musoro Digital Currency Research Department panguva People wacho Bank of China, akataura kuti mari regulator anofanira ngaateme National cryptocurrency kuti chaizoshandiswa semusimboti pamutemo nyoro nekukurumidza.
Muna December nechepakati pamahombekombe United Arab Emirates uye Saudi Arabia yakatanga mutyairi wendege kutanga muchinjikwa-muganhu kubhadhara. Kunobatanidza Saudi Arabia kuti Central Bank iri rinobwinya, kwakapiwa kuti asati pakanga pasina pamutemo mashoko pamusoro cryptocurrency, crypto musika, kana blockchain ne regulators zvemari munyika. The U.A.E., akavapindurawo kwayo, ari kugadzira vanoverengeka blockchain mabasa ari private uye voruzhinji chikamu, uye Global Blockchain Council of Dubai ari mutariri vazhinji vavo.
Mutemo Crypto Market